I-ESRI Image Mapper, ukupapasha iimephu - i-Geofumed
NgoNovemba, 2007 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, GIS asibonise
Phakathi izisombululo ezifanele web ESRI ukuba likhuphe 2.0 HTML Image Mapper, ngenkxaso zombini maqonga 9x efana 3x omdala kodwa zisebenza.
Ngaphambi kokuba sibone amathoyizi e-ESRI, awazange asebenze kakuhle, ngokukodwa kuba bafuna ukugcina iiWFS kunye neWMS kwiifom zabo.
Phakathi kwezinye izinto ezifanelekileyo, ulandelelwano lwayo lokubhala, apho inyathelo kunye nanyathelo liqwalasela imvelaphi yedata, ifomathi yokubonisa, iziteshi zangaphandle kunye neempawu ezithile.
Makhe sibone ezinye zezinto azinikela zona:
Usebenza, Indalo ngemizuzu
Akukho nolwazi lwekhowudi ye-HTML olufunekayo, nangona iifayile ezimbalwa zoNcedo lweCSS
Iyakuthunyelwa ngqo kwiprojekthi ye-3x
Ayifuni izicwangciso zeseva eziphambukayo
Inokushicilelwa kwendawo okanye kwi disk yokugcina ... kwaye isebenza
Iliso ... inkxaso kwii-3x iinguqulelo njengesandiso
Ekugqibeleni iimephu zepropati zisebenza kakhulu, zizisa imenyu yazo eyisiseko yokufuduka, ukubonisa, ukukhangela kunye neempawu.
Kuthetha kakuhle kakhulu kwikhankaso yakho yentengiso: Imfundiso kunye neempawu: Zigcine zilula.
Post edlulileyo«Edlulileyo Imephu Iziteshi: yakha imephu, ufumane imali
Post Next Ufuna iibhloko ze-AutoCAD?Okulandelayo "